Kuchengeta Kwevanhu Kwevanhu | Stylish Varume
Vazhinji uye varume vazhinji vari kutanga kuzvitarisira nenzira yakakura, kungave nekuzora mafuta, kurapa kwakasiyana kana kutovhiyiwa kwakasiyana. Tsvaga iyo akanakisa matipi ekuchengetedza wega Haisi kazhinji riri nyore basa asi pano iwe unogona kuwana akawanda akanakisa aunowana pamambure uye ayo aunogona kunyorera gare gare.
Tsvaga nyika nyowani ku zvichengete uye uchengete iwe mudiki uye wakanaka uchitamba mutambo wakakura weukweguru uye kana iwe uchitova mudiki, tora mukana wezano iri kuti uzvichengete iwe nenzira yakanyanya kunaka.
Kupeta sei bvudzi
kubudikidza Alicia tomero inoita 2 mazuva .
Kupfeka bvudzi rakamonana muvarume ichiri chimiro chinoramba chichikwira. Vechidiki ndivo vanonyanya kufarirwa...
Nzira yekuziva sei kana uchida mumwe munhu
kubudikidza Alicia tomero inoita 5 mazuva .
Ichokwadi chinoda kuziva, kuziva kana iwe uchida mumwe munhu kunogona kugadzira gore rekusagadzikana, kunyanya ...
Magadzirirwo anoita masaisai ekusevha
Masaisai ekusevha anonzwa zvakanaka muzhizha. Ivo vanogadzira kuwirirana kwakawanda pakugadzira iyo kutarisa kwemahombekombe. Ne…
Nzira yekusarudza shangu dzezhizha kana iwe uri murume
Iyo bhutsu yezhizha ndiyo yakanakisa sarudzo yekusarudza inofema, yakagadzika zvinhu uye dzimwe nguva ine yakawanda…
Wedzera biceps kumba
Mabiceps ndeimwe yenzvimbo dzemuviri dzaunoda kusimudza zvakanyanya, zvichibatsira kukura mhasuru yako uye…
kubudikidza Alicia tomero inoita Mavhiki e2 .
Nyaya yekunakirwa nevakadzi kune varume inyaya yakaoma kutaura. Naizvozvowo…
kubudikidza Alicia tomero inoita Mavhiki e3 .
Isu tinorarama munguva yerusununguko rwakakwana rwekugara pane chero bvudzi. Chokwadi ndechekuti…
Ose ari maviri blazer, bhachi nebhachi, ane chirevo chakafanana, asi muchokwadi chimwe nechimwe chine pfungwa ...
kubudikidza Alicia tomero inoita Mavhiki e4 .
Zhizha rino tine mhando huru dzinoyevedza uye dzinotonhorera gore rino ra2022. Comfort haigone kushaikwa, ne…
Vhudzi remazuvano revarume
Gradient kugerwa kwevarume
Vhudzi refu revarume
Nzira yekuveura musoro wako nenzira kwayo?
Une mapundu kumusana kwako here?
Ndebvu Dzemazuva matatu - Zvikanganiso Iwe Zvaunofanira Kudzivisa
Mufashoni Wemafashoni: Hipster Ndebvu
Zvikanganiso zvina zvakajairika zvinoitwa nevarume vane bvudzi rakanaka (uye maitiro ekuzvigadzirisa)
Rudzi rwendebvu zvinoenderana nechiso chako
Ndebvu: Maitiro Ekuwana Yakakwana Cheek Line
Bvudzi rakanakisa revarume vane zviso zvakakomberedza
Izvo zvina zvakakosha zvigadzirwa zvevarume vane bvudzi rakanaka
Ndeapi marudzi ematsotsi anoita kuti uwedzere kukwezva?
Ndebvu dzenhema dzevarume vamazuvano
Matipi ekurova mburwa mukukura
Chii chatinoita nevhudzi repasi?
10 zvinokonzera kutsamwa mushure mekuveura ndebvu